जुम्लामा स्याउ महोत्सव गरिँदै « Harekpal
हरेकपल TV HD
हरेकपल August 21, 2019
सिञ्जा, ४ भदौ । जुम्लावासी यतिबेला स्याउको बजारीकरणमा व्यस्त हुने बेला भएको छ । पछिल्लो समय पूरै जुम्ला स्याउमय बन्न पुगेको छ । यहाँको प्रमुख आन्तरिक स्रोतका रुपमा रहेको स्याउ निर्यातको सबैलाई चटारो छ । पछिल्लो समय स्याउ जुम्लाको चिनारीसमेत बनेको छ । गत वर्ष जिल्लामा १५ हजार बगैँचामा करीब साढे ४४ हजार बोट रोपिएको तथ्याङ्क कृषि ज्ञान केन्द्रले देखाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष तीन हजार १५० मेट्रिकटन स्याउ फलेको थियो । यस वर्ष त्यसको दोब्बर छ मेट्रिकटन स्याउ फल्ने अनुमान कृषि ज्ञान केन्द्रको छ । यस्तै यही सम्भावनालाई उजागर गर्न दोस्रोपटक यही भदौ १४ गते ‘जुम्ला स्याउ महोत्सव २०७६’ हुने भएको छ । यहाँ उत्पादित स्याउलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म चिनाउन स्याउ सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।
भदौ १४ गते जुम्ला स्याउ महोत्सवको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका कृषिमन्त्री विमला केसीले गर्ने कान्जिरोवा टाइम्सका प्रबन्धक निर्देशक महेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । आयोजक कान्जिरोवा टाइम्सले स्याउको उत्पादन, प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा टेवा पु¥याउने, एप्पल टुरिज्मको आधार तय गर्ने र स्याउका परिकारको उत्पादनसम्बन्धी प्रचार–प्रसार गर्ने उद्देश्यले महोत्सव गर्न लागिएको जनाएको छ ।
आयोजक कान्जिरोवाका निर्देशक कार्कीले उत्पादित स्याउको निर्यात प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने र स्याउ खानकै लागि जुम्ला पुग्न सघाउ होस् भनेर स्याउ महोत्सव गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जुम्ला स्याउबाट आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । जुम्लालाई ‘एप्पल टुरिज्म’का रुपमा चिनाउन महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । देश तथा विदेशमा स्याउप्रतिको आकर्षण बढाउन महोत्सव आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
एक दिनको महोत्सवमा स्याउका विभिन्न परिकारका स्टल राखिने समेत कार्कीले जानकारी दिनुभयो । सदरमुकाम खलङ्गामा चल्ने महोत्सवको मुख्य आकर्षण भनेको जुम्लामा फल्ने विभिन्न एक दर्जन बढी प्रजातिका स्याउबाट बन्ने विभिन्न किसिमका परिकार रहने छन् । यसमध्ये करीब दुईतिहाई रेड र गोल्डेन डेलिसियस जातका स्याउका परिकार विषेश आकर्षणका रुपमा रहने आयोजकले जनाएको छ ।
पछिल्ला तीन वर्षयता जुम्लामा शुरु गरिएको इटालियन फिजी स्याउ पनि स्टलमा राखिने कार्कीले जानकारी दिनुभयो । स्याउसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिन स्याउ सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यस्तै विभिन्न स्थानीय संस्कृति झल्कने सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि देखाइने भएको छ । डकुमेन्ट्री एण्ड पोष्टरिङ बाल क्रियाकलाप र एप्पल ट्री प्रदर्शन नै स्याउ महोत्सवका आकर्षण हुन् । यही सम्भावनालाई उजागर गर्न जुम्लामा पहिलोपटक गत वर्ष भदौ १६ गते स्याउ महोत्सव गरिएको थियो ।
सिमकोटकाे अध्यक्षमा माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार..
माडी नगरपालिकाको मेयरमा एमालेकी ताराकाजी निर्वाचित
सिद्धिचरणमा प्रमुख कांग्रेस, उपप्रमुखमा एमाले
जुम्लाका २३ वडामा नेपाली कांग्रेस विजयी
विष्णुपुर गाउँपालिकाकाे अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा जसपाका उम्मेदवार..
६ हजार ७४३ मध्ये ४ हजार ८६८..
गणना ढिलो भएपछि पोखरामा थपियो गणनास्थल
ढिलै भए पनि एमालेले विवेकले काम गर्योः..
सुदूरपश्चिममा ठूलो दल बन्दै कांग्रेस, तर नेतृत्वमा..
४४४ स्थानीय तहको छिनोफानो हुँदा कुन दलले..
कांग्रेसले जित्यो २०१ स्थानीय तहको प्रमुख
थाहा पाउनुहोस् आजको राशिफल
थाहा पाउनुहाेस् तपाईंकाे राशीफल
थाहा पाउनुहोस आजको राशीफल
सिंहलाई परिवारबाट सहयाेग प्राप्त हुने, अरु राशीकाे..
थाहा पाउनुहाेस् तपाईंकाे राशिफल
‘मेरो आनन्दको स्रोत म स्वयं हुँ’
तबमात्र तपाईंले अस्तित्वको अनन्ततालाई जान्न सक्नुहुनेछ
आज चन्द्रमा धनु राशिमा र सुकर्मा योग,..
कस्ता कुरामा सदा ख्याल राख्नुपर्छ ? हेर्नुहोस्..
मित्रको परीक्षा कतिबेला हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको..
कस्ता कुरामा सचेत रहनुपर्छ ? हेर्नुहोस् आजको..
सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्था लि.
Suchana Chautari Sanchar Co. Ltd.
DEPARTMENT OF INFORMATION AND BROADCASTING Registration No. : 367/073/074
अध्यक्ष : बिपिन शर्मा
प्रधान सम्पादक : पुरुषोत्तम दाहाल
सम्पादक : प्रकाश थापा
KailashChaur, Lazimpat, Kathmandu
Email: [email protected] (For News)
Email: [email protected] (For TV News)